Hery - Tsiky dia ampy | 122
2006-04-27 @ 21:52 in Serasera.org
Vita tamin'ny alina ny dingana voalohany amin'ny fanavaozana ny takelaka lisitra.serasera.org. Efa ela ihany no naniriako hanavao an'io takelaka io ary efa vonona tao ny modules rehetra hampidirina ao amin'ny solaitra fa noho ny antony samihafa dia izao vao vita. Io takelaka io no azo atao hoe takelaka renin'ny takelaky ny serasera.org rehetra. Io no takelaka nisokatra voalohany tamin'ny taona 1999, dia avy eo ny tononkira, dia izay vao ny namana. Io no anisan'ny fitaovana niasa tamin'ireny fotoana mivaivain'ny 2001-2002 teo amin'ny Firenena ireny. Misy mpikambana mihoatra ny 1.300 ary nanaparitaka hafatra imailaka mihoatra ny 26.000 nandritra izay enin-taona izay. Mbola voatahiry eto daholo ny hafatra rehetra hatramin'ny voalohany.
Tonga soa... cousine :-)
2006-04-25 @ 22:07 in Ankapobeny
Gaga be aho androany fa nahazo email izay tsy nampoizina mihitsy. Email tany amin'izay cousine kelinay izay. Tena mbola kely izy tamin'izaho tany Madagasikara fa ny taona moa mandroso ary ny ankizy koa maroroka ka inoako fa efa lehibe tokoa izy izao nanoratra tamiko izao.
«Mialoha 1 2 3 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 130 131 132 Manaraka»